Rudzi: zvokudya uye kubika
Hove yemakeke ndeimwe yeakanakisa masango ehabango muRussia chikafu. Recipe
Hangover soups pane aya mushure mezororo mazuva akakosha kupfuura nakare kose. Mumazuva ekare muRussia, hangover yakabviswa kwete chete nekaka yemagaka, asiwo mapundu akabikwa pairi.
Iyo nzira yemucheka wakasvinwa machena kabichi, iyo inokwenya zvinoshamisa pamazino
Pickled kabichi inonyanya kukodzera masaradhi. Maiwe, haugone kubika muto wekakichi kana hodgepodge nayo, sekusauerkraut. Asi yehombodo ine girazi re "chena diki" yakashongedzwa nezvinonhuwira, zvishoma zvinonaka uye zvine kabichi kabichi - ndizvozvo.
Chero ani akambove pazororo muOdessa angangodaro akashamiswa nemhando dzakasiyana dzedhishi kubva kuBlack Sea mussels. Ehe, iwo haana kukura seaya egungwa, asi zvakare anonaka uye ane hutano. Madhiri ...
Iyi plamu pie ine bundu rakapfava, rinozadza muto neinonhuwira inonaka inouya kubva kusinamoni uye ginger. Mafuta anonhuwirira uye anonakidza, hazvigoneke kuti usatora chinowedzera! Plum Pie Zvidimbu - Recipe ...
Frozen Berry Raspberry Liqueur - Maitiro Ekugadzira
Munguva yemwaka we raspibheri, vakadzi vazhinji vepamba vangangodaro vakatumira ma berries ane hutano kufiriji - yekuchengetedza kusvika nguva yechando. Kubva mumatanda, unogona kugadzirira chinwiwa chinonaka chaunogona kugutsa mazororo. Chinwiwa chinobuda ...
Pakati pemhando dzakasiyana siyana dzekunakisa sauces, izvi zvitatu ndizvo zvandinofarira. Ini ndinogara ndichibika imwe yadzo nyama, huku, machipisi akagadzirwa kana kutengwa, pasita, pita chingwa nezvimwe zvakawanda. Chaizvoizvo,…
Aya masupu anoshamisa ari kuwedzera kukuru kune ako aunoda madhishi. Vachaita tudyo twenyu kunyange tastier. Sarudzo yemabikirwo. Cheese muto Kwe 200 g yeakagadzirira-yakagadzirwa muto muto: 110-120 g yeakaomeswa chizi; ...
peji 1 peji 2 ... peji 645 Next Page
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,667 masekondi.